Buug cusub oo laga qoray madaxtinimadii Nelson Mandela - BBC News Somali
Image caption Nelson Mandela oo markaas xabsiga laga soo siidaayay , waxaa gacanta haysata xaaskiisii hore Winnie Mandela
Buuggan oo uu Mandela laftiisa qoray, ayuusan balse dhamaystirin sababo la xiriira da'diida iyo caafimaad daro, waxaana hadda buuga dhamaystiray qoraaga lagu magacaabo Mandla Langa oo isaga laftiisa ka mid ahaa dadkii u ololeeyay xornimada Koonfur Afrika, ahaana nin ay isu dhowyihiin Mandela.
Mandela waxaa horay looga qoray buugga Long Walk to Freedom ( Hayaankii dheeraa ee xornimada), kaas oo laga iibsaday 14 milyan oo nuqul adduunka oo dhan, markii dambana laga sameeyay filim Hollywood-ka ah oo uu jiley Idris Elba.
Buug uu qoray Dhakhtarkii Mandela oo Daabacaaddiisa laga laabtay
Xaaskii Mandela Graca Machel ayaa iyaduna sidoo kale wax ka qortay buugga cusub oo ka hadlaya xiligii guddigii caanka noqday ee runta iyo dib u heshiisiinta ee caddaanka iyo madoowga lagu wada hadashiiyay.
Mandela ayaa waxa uu heley abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel-ka loo yaqaan, doorkii weynaa ee uu ka qaatay in caddaanka iyo madoowga Koonfur Afrika ay nabad ku wada noolaadaan awgiis.
Waxa uu noqday qofkii ugu horeeyay oo madoow ah oo madaxweynenimo loo doorto Koonfur Afrika sanadkii 1994-tii, wuxuuna xilka hayay illaa sanadkii 1999-kii, xiligaas oo uu xilka kala Thabo Mbeki.
Nelson Mandela waxa uu geeriyooday sanadkii 2013-kii.
Sooyaalka Taariikhda Mandela
1918: Waxa uu ku dhashay gobolka Eastern Cape
1944: Wuxuu ku biiray xisbiga African National Congress (ANC)
1962: Waa la xiray, waxaana lagu xukumay 5 sano
1964: Markale ayaa lasoo dacweeyay, waxaana lagu xukumay cimri xarig
1990: Xabsiga ayaa laga siidaayay
1993: Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel-ka.
1994: Madaxweyne ayaa loo doortay
1999: Waxa uu ka dagay madaxweynenimada
2004: Waa uu hawlgabay
2010: Waxa uu kasoo muuqday tartanka kubadda cagta adduunka.